Latifundia - यो के हो? रोम यसको भूमिका के थियो? यसलाई यो प्रश्नको जवाफ सजिलो हुन सक्छ जस्तो थियो। तर, यो विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले को विचार diverge। प्रत्येक यसको आफ्नै तरिकामा एस्टेटहरूको अवधारणा व्याख्या। थप विवरण यस अवधारणा को व्याख्या विचार गर्नुहोस्।
Latifundia - यो के हो?
तपाईं शाब्दिक शब्द अनुवाद भने, त्यसपछि हामी "विशाल सम्पत्ति।" प्राप्त पहिलो नजर मा, यो राम्रो सरल छ। तर आधुनिक इतिहासकारहरूले latifundia परिभाषित गर्न धेरै विकल्पहरू प्रस्तावित छन्। तिनीहरूले "विशाल सम्पत्ति" स्टेशन र 100 दक्षिण र 1000 दक्षिण सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई आधारित थियो।
उदाहरणका लागि, K. Bucher दास को एक विशाल नम्बर विशाल latifundia अर्थव्यवस्था, अर्थात्, oikos द्वारा चाहनुभएको। दास पर्यवेक्षकों नेतृत्व छन् समूह विभाजित थियो। यी, बारी मा, छाउनी बस्थे। र लास, परिभाषा दिंदै latifundia एक विशाल अर्थव्यवस्था मा सानो जायदाद को विलय एक प्रकारको छ कि जोड दिए। एक Schulten फरक दृश्य व्यक्त गरे। उहाँले तर्क छ को latifundia कि - एक चरण रूपमा प्रयोग भएको थियो जो भूमि टुक्रा। तर समय, कारण बाड अलग खण्डहरू विभाजित थियो भन्ने तथ्यलाई यो धारणा परिवर्तन भएको थियो। तर, landowners इटाली विभिन्न भागहरु मा संपदा गर्ने स्वामित्व मानिस भनिन्छ। तर पछि यो भूमि एकाग्रता प्रक्रिया भनिन्छ गर्न थाले, र विशाल संपदा देखा पर्न थाले।
रोमन समाज को आर्थिक जीवनको सन्दर्भ मा latifundia को संकल्प
कागजात मा वेबर latifundias Cato वर्णन कि मध्य नाम विरोध गर्नुभयो। एक, सघन, व्यवस्थापन एक एकदम ठूलो आकार-गहन प्रकार र rationally संगठित श्रम दास राख्नु - विशेष मा, यो latifundia कि प्रख्यात थियो।
। यो latifundia कि जे Salvioli राय - राख्नु छ, लाभ जो एक परिवारको आवश्यकता भन्दा बढी र त्यो एक्लै सम्हाल्न सक्ने। जब Cato latifundia 150-200 दक्षिण राख्नु छलफल। sparsely आबादी क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यापक प्राप्त संपदा। तिनीहरूले खेती को व्यापक विधि प्रयोग विचारणीय छ। सामान्य मा, latifundia - feudal पैतृक भूमि एक प्रकारको, Charlemagne समय समान संपदा।
ठूलो एस्टेटहरूको दुई प्रकार - फरक के छ?
सोभियत वैज्ञानिकहरू रोमी latifundia मा मौलिक अनुसन्धान सञ्चालन। त्यसैले, एम Rostovtsev फारमहरु दुई प्रकार हो। पहिलो प्रकार - एकदम तिनीहरूले गर्ने वृक्षारोपण काम गरे दास बाँचिरहेको दास हजारौं, मास्टर विला, कोला, plows, र गाउँमा भएकाहरूले वर्णन Cato अर्थव्यवस्था उच्च थिए जो ठूलो संपदा छ। समय, को संपदा, विशेष को पूंजीपति मोडेल को बजार मा काम को यस प्रकार को लागि संगठित। Campanian latifundia - यो व्यवस्थापन को संगठन को दोस्रो संस्करण हो। यो एक ठूलो सम्पत्ति, र धेरै सानो क्षेत्रको संग्रह छैन। तिनीहरूले Pompeii को सानो विला नजिक प्रकार अनुसार गठन गरियो।
तिनीहरूले पूंजीपति उद्यम, वास्तवमा थिए। तर, ठूलो एस्टेटहरूको संगठन को यस संस्करणमा रोम लागि atypical थियो र infrequently भेटे।
यो सत्य पनि latifundia इटाली बर्बाद गरेको दृश्य छ?
धेरै अवस्थामा रूपमा, अनुवाद मा त्रुटि ठूलो त्रुटि हुन सक्छन्। वाक्यांश विश्लेषण «lalifundia perdidere Italiam» प्लाइनीले स्वामित्वमा छ जो एल्डर, एम Reinach यसलाई "संपदा इटाली बर्बाद छ" रूपमा अनुवाद भने, सामान्य सन्दर्भमा बाहिर खडा भनेर बाहिर अंक। यो पक्कै पनि इटाली कृषि को deplorable अवस्थामा पोइन्ट र एम Reinach यो वाक्यांश अनुवाद गर्न रुचि "इटाली latifundia गुमाउन सुरु" को रूपमा। अर्को शब्दमा, ठूलो दास संपदा खस्कँदो छन्। यसबाहेक, यो प्रक्रिया राजधानी को वरपर मा, तर पनि प्रान्त मात्र छैन हुन्छ। यो दास यसमा काम संग भूमि को एक ठूलो षड्यन्त्र छ - कुनै पनि अवस्थामा, हामी latifundia भनेर भन्न सकिन्छ।
जीवनी र Fernand Braudel को काम
Peshkova Ekaterina Pavlovna, गोर्की पत्नी: छोटो जीवनी
सम्बन्ध को ABCs: प्रेम मा एक मानिसको व्यवहार
जस्ता Picolinate: पुस्तिका र समीक्षा
उचित कृषि प्रविधी र स्ट्रबेरी उच्च उपज को रहस्य
टाटु Sakura: यो अर्थ के हो?
कम्प्युटर मा अन्तिम कार्य कसरी पूर्ववत गर्न? सञ्चालन प्रणाली पुनस्थापित
यो श्रृंखला "Karpov": अभिनेता र भूमिकाको
Ilovajskij बयलर: वर्णन, इतिहास, लडाई र रोचक तथ्य
कसरी 4t स्कूटर मा ज्वलन राख्न? सञ्चालनको सिद्धान्त, असफलता र सेटिङ लागि कारण